🥇 ▷ Waxaad hadda ku rakibi kartaa kamaradaha Google GCam taleefankaaga Huawei ✅
Waxaad hadda ku rakibi kartaa kamaradaha Google GCam taleefankaaga Huawei
Maanta, Codsiga Google Camera, ee sida fiican loo yaqaan Gcam, wuxuu la jaan qaadayaa kaliya mobilada leh processor-yada tayada leh ee loo yaqaan ‘processor processor’. Sababtaas awgeed, taleefannada Huawei, Maamuus, iyo ugu dambeyntii, dhammaan magacyada aan haysanin processor-ka shirkad Mareykan ah, ayaan la jaanqaadi karin Google Cam… Ugu yaraan illaa maanta. Dhawaan Celso Azevedo, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee soo saareyaasha muuqaallada Android, ayaa daabacday nooc ka mid ah Google Camera oo la jaan qaada inta badan taleefannada Android, oo ay ku jiraan taleefannada Honor iyo Huawei.
Google Camera 7.0 ee Android 10 ayaa hadda la jaan qaada telefoonnada Huawei iyo Honor
Ka dib dhowr bilood oo sugitaan ah tan iyo markii la daabacay khiyaanooyinka ugu horreeya ee dalabka, nooca toddobaad ee kaamirada Google ayaa hadda diyaar u ah dhammaan taleefannada iswaafaqsan.
Sawir laga soo saaray Technobuzz.
Iyada oo ku saleysan nooca isku midka ah ee hadda jira ee Android 10 ee Google Pixel, wararka aan ka heli karno noocaan cusub waxay ku saleysan yihiin Awood si aad u soo dhaweyso qaab Habeenki iyo hirgelinta dhowr ikhtiyaar oo noo oggolaaneysa inaan la ciyaarno the selfie iyo tayadeeda Aesthetics-ka dalabka ayaa dib loo cusbooneysiinayaa marka loo eego himilooyinkiisii ​​hore, waxaana ku jira qaab caqli gal ah oo soo jeedinaya talooyin ku saabsan helitaanka sawirro wanaagsan oo ku saleysan macnaha muuqaalka
Ugu dambeyntiina, Google Camera 7.0 waxaa ku jira labo nooc oo xallin ah (oo buuxa iyo mid dhexdhexaad ah) si loo habeeyo meelaha lagu keydiyo ee laga heli karo taleefanka casriga ah.
Sida loo rakibo GCam on Huawei iyo Honor
Maaha markii ugu horraysay ee aan aragno guul laga gaadhay astaamahaas. Markii hore, isla sameystaha ayaa ka dhigay dalabka Google Camera inuu la jaanqaado taleefannada Huawei oo leh qalabka loo yaqaan Kirin 980. Ka dib markii la faafiyay hanaankii toddobaad ee dalabka, GCam wuxuu xayiraadda ka qaaday dhammaan mobilada sumadda Shiinaha… Ama ku dhawaad ​​qof walba.
Sida horumariyaha laftiisu ku shaaciyey degelkiisa rasmiga ah, mid ka mid ah shuruudaha lagama maarmaanka u ah in lagu raaxeysto dalabka Android ayaa ku saleysan leeyihiin taleefan ku habboon Camera2 API. Si loo xaqiijiyo in, si la taaban karo, mobiladeena u la jaanqaadeyso maktabadan, waxaan adeegsan karnaa codsiyada sida Camera2 API Probe, oo aan ka soo dejisan karno Dukaanka Play laftiisa.
Qabsoommo sharaf 10 Lite. Barnaamijku wuu xirmayaa waxyar kadib markii uusan la jaan qaadi karin Camera2 API.
Markaan hubinno in Maamuuskeena ama Huawei guurguhu uu la jaan qaadayo, waxaan u sii wadi karnaa rakibidda dalabka iyada oo loo marayo xiriirkan. Maadaama faylka loo yaqaan ‘APK’ uu ka yimaado ilo ka baxsan kaydka rasmiga ah ee Google, waxaan ku qasbanaan doonaa inaanu dhaqaajinno sanduuqa rakibaadda dalabka ilo aan la garanaynin qaybta amniga ee qaybaha.
Ugu dambayntii waxaan ku sii soconayaa rakibkiisa sidii inay tahay codsi guud. Arintan ka dambaysa, waxaan ku siin doonnaa rukhsadaha kugu habboon Waana u adeegsan karnaa dalabka dhamaan quruxdiisa.
Faahfaahinta APK ee Google Camera ee Sharafta iyo Huawei
Wax kasta oo dhalaalaya ma aha dahab, iskaba daa haddii aan ka hadalno processor-ka Kirin, moodello, mudnaan, aan la socon karin kamaradda Google.
Marka hore, howsha qaadista sawirku uma shaqeyn doonto sidii caadiga ahayd. Mana isticmaali karno habka Habeenki ama nooc kasta oo laxiriira qabashada sawirka.
Muxuu shaqeeyaa, oo si qumman u shaqeeya, ayaa ah duubista fiidiyowga, xitaa isticmaalidda kamaradda hore. Iyada oo loo adeegsanayo xulashooyinka dalabka waxaan ku bedeli karnaa labadaba tayada iyo xallinta iyaga.
Sikastaba, cusbooneysiinta waxaa la filayaa in si joogto ah loo siidaayo si loo saxo khaladaadka lala xiriirinayo qabsashada sawirka.
Warar kale oo ku saabsan… Kaamiro, Maamuus, Huawei